दाखमद्यले होईन, पवित्र आत्माले भरिनु : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
दाखमद्यले होईन, पवित्र आत्माले भरिनु
कतिजना मानिसको हृदय रित्तोपना भएकोले विभिन्न विकल्पको खोजीमा लाग्दा कोही निराशाले भरिन्छन् । कोही चिन्ता फिक्रीले भरिन्छन् । कोही जाँड, रक्सी र अनेक नशालु पदार्थको सेवनले पर्दा नशालु बन्छन् । केही न केही समस्या र कठिनाई र साथी संगतले पनि मानिसको जीवनमा विभिन्न प्रकारको अप्ठयारो अवस्थाबाट गुज्रीरहेका पाइन्छन् । हाम्रो जीवनमा यस्ता कुराहरुको बन्धन र दासत्वबाट मुक्त भएर पवित्र आत्मामा भरिनु चाहिं आवश्यक कुरा हो भन्ने सबै विश्वासीजनले बुझ्नु जरुरी छ ।
“दाखमद्यले नमात्तिओ, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण होओ ।”
यहाँ एफिसीको पत्रमा पावलले दाखमद्यले नमात्तिओ कारण त्यो विलासिता हो भनेर भनेका छन् । तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण होओ भनेर आदेश दिएका छन् । यहाँ विशेष गरी पावलले पियक्कडहरुको लागि विशेष चेतवानी र आदेश दिएका थिए । जुन जीवन ख्रीष्टमा जिईन्छ त्यो जीवन आफ्नो इच्छा अनुसार नभएर परमेश्वरको इच्छा अनुरुप जिउनु पर्छ भनेर विशेष जोड दिएका छन् ।
एफिसीको पत्र लेख्दा पावल आफै रोम शहरको एउटा झ्याल्खानामा बन्दी थिए । उनी झ्याल्खानामा पर्दा नयाँ करारको एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी र फिलेमोनका पत्रहरु लेखेका थिए । यो एफिसीको पत्र पावलले ६०–६१ ए. डी. मा लेखेका थिए । एफिसीका मण्डली र त्यस वरपर रहेका मण्डलीलाई लक्षित बनाएर लेखिएको यो पत्र सबै मण्डलीको लागि पनि लेखिएको पत्र हो । एफिसीमा भएका विश्वासीहरुमाझ भईरहेको समस्यालाई केन्द्रीत गरी पत्र लेखिएको थियो । वास्तवमा यस्ता समस्या एफिसीको मण्डलीमा मात्र नभएर आज सबै मण्डलीहरुमा रहीरहेको छ । यसकारण यो एफिसीको पत्र आज हाम्रो लागि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
यहाँ पावलले दाखमद्यले नमात्तिओ भनेर भनेका छन् । दाखमद्य अथवा कुनै पनि लागू पदार्थ सेवन गरेर अथवा मद्यपानले हामी मात्तिनु हुँदैन । दाखमद्य, जाँड रक्सी, भोडका, वियर अथवा मद्यपानमा गनिएका कुराहरु पिएर मात्तिनलाई मनाही गरिएको छ । कति विश्वासीहरु विश्वासी भएर जाँड, रक्सी लगायतका मात्तिने मदाक पदार्थ पिएर मात्तिन्छन् । यस्ता मद्यपानले मात्तिनुचाहिं निश्चय पनि पाप हो । जब मात्तिन्छ अरु पाप त्यसले उत्पन्न गराउँदछ । मातेका मानिस पापपूर्ण कार्यमा अल्झिन थाल्दछ । पावलले भन्दछन् कि दाखमद्य अथवा मद्यपान पिएर कुनै पनि प्रभुको जन नमातियोस् ।
यहाँ एफिसीका मण्डलीमा आएका अन्य जाति विश्वासीहरु विश्वास गर्नु अगाडि जोड तोडकासाथ दाखमद्य पिएर मात्तिन्थे । आज विश्वासी भएर पनि टन्न दाखमद्य पिएर मात्तिने बानीबाट परिवर्तन नभएकोले पनि पावल तिनीहरुलाई परिवर्तन हुनको लागि आदेश दिदँछन् । हाम्रै मण्डलीमा पनि कति विश्वासीहरु एफिसीका मण्डलीका विश्वासीहरु जस्ता जाँड, रक्सी खाना नछोड्ने, टन्न मद्यपान पिएर मात्तिएर हिंड्ने, चुरोट, खैनी खाना नछोड्ने समस्याले मण्डलीमा पावलले दिएको यो आदेश अति नै समसमायिक र महत्वपूर्ण छ । खासमा विश्वासी नहुनु भन्दा अगाडि गरिएका यी कुराहरु अब विश्वासीजनले छोड्नु पर्दछ । त्याग गर्नु पर्दछ ।
म स्वतन्त्र छु त्यसकारण म जे चाहन्छु त्यो गर्न सक्छु भनेर मानिस आप्mनो मनले चिताए अनुसार गर्ने अनि परमेश्वरको वचन अनुसार नजिउने कुरा हाँस्यस्पद छ । हामी अरुको निम्ति बाधाको तत्व बन्नु हुँदैन । अरुको लागि गलत उदाहरण बन्नु हुँदैन ।
बाइबलमा दाखमद्यमा मात्तिनेहरुको जीवनमा आउने नतिजाको बारेमा विभिन्न बिचार व्यक्त गरिएको छ । “दाखमद्य उपहास गर्ने हो, र मदिराचाहिं कचिङ्गल मच्चाउने हो, यी कुराको लतमा रुमलिनेहरु बुद्धिमान हुँदैनन् ।” हितोपदेश २०:१ । दाखमद्य उपहास ल्याउँदछ र मदिराले कचिङ्गल मच्चाउने कुरा गरेको छ । जो मान्छे मदिरा मादक पदार्थको लतमा पर्दछन् ती मानिसहरु निश्चय पनि बुद्धिमान हुदैनन भनेर यहाँ बताईएको छ ।
“किनभने मतवाला र खन्चुवाहरु दरिद्र बन्छन्, यस्तो लठ्ठयाँईले तिनीहरु झुत्रे बन्छन् ।” हितोपदेश २३:२१ । यहाँ मतवाला अनि खन्चुवाहरु दरिद्र बन्ने र झुत्रे बन्ने कुरा बताईएको छ ।
“कष्ट कसलाई हुन्छ? शोक कसलाई हुन्छ? कलह कसलाई हुन्छ? गुनासो कसलाई हुन्छ? कसलाई आनवश्यक चोटपटक लाग्छ? कसका आँखाहरु रगतजस्ता राता हुन्छन्? तिनीहरुकै जो मद्यमै भुलीरहन्छन्, जुनहरु मिश्रित मद्यको प्याला चाख्न चाहन्छन् । रातो दाखमद्यमा एकटक लगाएर नहेर, जब त्यो कचौरामा राख्दा पिंmज उठछ, जब त्यो सहजै उँधो जान्छ । अन्त्यमा त्यसले सर्प झैं डस्छ र गोमनले झैं विष हाली दिन्छ ।” हितोपदेश २३:२९–३२ । मदिरापानबाट आउने नतीजाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । विषालु सर्पको विषसँग तुलना गरिएको छ । आज विश्वासीहरुले जाँड रक्सी मदिरापानको कुलतबाट अलग रहनु पर्छ । यसको सेवनबाट मानिसको विभन्न समस्याहरु आईलाग्ने कुराबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । त्यसैकारण पावलले भन्छन् दाखमद्यले नमात्तिओ यो त विलासिता हो तर पवित्र आत्माले भरिओ भनेर जोड दिएका छन् ।
आफुले मद्यपान गर्नु अथवा जाँड रक्सी पिउनु पाप हो भने अरुलाई दिनु पनि यो पापै हो । कतिचोटी विश्वासीहरु आफु नखाए पनि घरमा आउने पाहुनाहरुलाई जाँड रक्सी किनेर ल्याउँदछन् अनि तिनीहरुलाई खाना दिन्छन् । जे कुरा हामीले खानु हुँदैन त्यो अरुलाई पनि दिनु हुँदैन । १ कोरिन्थी ३:१६ र १७ पदले भन्दछ “के तिमीहरुलाई थाहा छैन, तिमीहरु परमेश्वरका मन्दिर हौ, र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरुमा वास गर्नुहुन्छ ? कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नु हुनेछ । किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, र त्यो मन्दिर तिमीहरु नै हौ ।” निश्चय हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएकोले यसलाई अशुद्ध, अपवित्र अनि नाश गर्ने काम गर्नु हुँदैन । यसलाई पवित्र राख्नु आवश्यक छ ।
सुःख पाउन, पीर भुल्न अनि मद्यपानको नशामा बानी परेका सबैले जाँड रक्सी अनि मद्यपान पिउँछन् । त्यसबाट उत्पन्न भएका आनन्द, उत्साह र सुःख एक क्षण पछि नै हराई हाल्छ । पैसाको पनि बरबादी हुन्छ । अनि स्वस्यको पनि हानि हुन्छ । मानिसले स्थायी सुःख अनि शान्ति र उत्साह पाउन त एउटै उपाय छ त्यो हामी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु पर्दछ ।
दाखमद्य पिउनु, मात्तिनु यी सबै विलासिता हुन् । बरु हामी यसको साटोमा परमेश्वरमा धार्मिकताको जीवन जिउनु जरुरी छ । पवित्र आत्माको शक्तिमा भरिनुपर्दछ भनेर पावल भन्दछन् । यहाँ पवित्र आत्माले भरिनु भनेको के हो त? भरिनु भनेको कुनै खाली भाँडोलाई भर्नु हो । ग्रीक शब्द “pleroo” प्लेरो ले भरिने सम्बन्धमा तीनवटा अर्थ दिदँछ ।
१, पहिलोचाहिं यस्तो वल हो जो सार्दछ । अथवा जुन वलले अगाडि बढाउँदछ अथवा यता उता चलाउँदछ । जस्तो यो शब्दको विषयमा गर्दा समुद्रमा जहाज चल्दा हावा जहाजमा भरिन्छ । जसले शक्ति दिन्छ र त्यसले सार्ने काम गर्दछ । अगाडि बढाउने, निश्चित दिशातिर बढाउने काम गर्दछ । त्यस्तै तरिकाले जब हामी यो अबधारणालाई हाम्रो आत्मिक जीवनमा लागु गर्दछौं । जब हामी जीवनमा पवित्र आत्माबाट भरिन्छौं कि यो कुरा थाहा गर्न सक्छौं कि पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई अगाडि बढाउँदछ । दिन दिन पवित्र आत्माको शक्तिद्धारा हामी परिचालित हुन सक्दछौं । पवित्र आत्माको वहाव र अगुवाई अनुसार हामी चल्नु पर्दछ ।
२, दोस्रोचाहिं व्याप्तरुपमा फैलिनु हो । जब तपाईंले चिया, कफी अथवा जुस जे हालेर ग्लासमा हालेर खानुहुन्छ । तर तपाईंलाई त्यहाँ भएरको स्वाद मन परेन अथवा त्यसमा अझ चिनी अथवा गुलियो कम भयो र स्वाद आएन तर तपाईंले त्यहाँ आफुलाई चाहिने जति गुलियो अथवा चिनी हालेर घोल्नु हुन्छ र त्यो स्वाद तपाईंको ग्लासभरी फैलिन्छ । अनि स्वाद राम्रो बनाएर पिउनुहुन्छ । त्यस्तै तरिकाले यदि हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौं भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्माको कुरा देखिन्छ । हाम्रो जीवनको हरेक भागमा नै उहाँको आत्माको काम फैलिन्छ ।
३, तेस्रोचाहिं पूर्ण नियन्त्रणमा पर्नु भन्ने हुन्छ । अधीनमा पर्नु अथवा पुरा नियन्त्रणमा पर्नु भन्ने हुन्छ । यहाँ मद्यपानले भरिने मानिसको जीवनमा त्यसैले नियन्त्रण र अधीन गरीरहेको हुन्छ । पावलले यहाँ दाखमद्यको अधीन र नियन्त्रणमा पर्नुको साटो पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा र भरिपुरीमा जिउनु पर्ने कुरालाई जोड दिएका छन् ।
यो आत्माले भरिने कुराचाहिं सबै विश्वासीहरुको लागि दिईएको आदेश हो । द्रनिक रूपमा पवित्र आत्माले भरिनु आवश्यक रहेको छ । जब हामी पवित्र आत्मालाई हामीभित्र आउने मौका दिन्छौं उहाँ हामीसँग रहनुहुन्छ । पावलले पवित्र आत्माले भरिओ भनेर सुझाव नभएर आदेश दिएका छन् । यसको अर्थ यही हो कि पवित्र आत्माले भरिदै जाओ । केवल आजको लागि मात्रै नभएर यो त सँधैको लागि पवित्र आत्माले भरिने कुरा गरिएको हो । पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरुको जीवन आत्माका फलहरुले भरिएका हुन्छन् । रक्सीले मातेको मानिस रक्सीको र आत्माले भरिएको मानिस आत्माको अधीनमा हुन्छ । रक्सीले भरिएको मानिस आपैmलाई अधीनमा राख्न सक्दैन र संयम राख्न सक्दैन । रक्सीले भरिएका अनि मद्यपानले भरिएका मानिसको जीवनमा भाँड भैलो र समस्या हुन्छन् तर पवित्र आत्माले भरिएका मानिसहरुको जीवनमा यस्तो भाँडभैलो र गडबड हुँदैन । त्यसैकारण पवित्र आत्माबाट पिउनुहोस् । जाँड रक्सी जस्तो तपाईंले पैसा तिर्नु पर्दैन । सित्तैमा पिउनुहोस् र आत्माको शक्तिले भरिनुहोस् ।
आज तपाईंको जीवन के ले भरिएको छ? के तपाईं कति जना विश्वासीजनहरु जाँड, रक्सी, विभन्न मादक पदार्थ, लागु पदार्थ, चुरोट, खैनीको नशाको बन्धनमा हुनुहुन्छ ? या अन्य कुनै पाप र अधर्मको बन्धनमा परेर पवित्र आत्माले भरिनुभएको छैन ? आज यो पापमय संसारमा आफुलाई पवित्रता राख्नु चुनौतीको कुरा हो । हामी आफ्नो वल र तगातले यो नसके पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले विजयी बन्न सक्दछौं । पुरानो करारमा दानिएलले पनि परमश्वरको नजरमा आफैलाइ शुद्ध राख्ने निर्णय गरे । “तर दानिएलले राजकीय भोजन र दाखमद्य खाएर आफुलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे, र तिनले यसरी आफुलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे ।” दानिएल १:८ । उनी दाखमद्य र राजकीय भोजन खाएर अशुद्ध नहुने निर्णय गरे । परमेश्वरको शक्तिमा आफुलाई लगाउने चेष्टा गरे । निश्चय पनि दानिएलको जीवनमा परमेश्वरको आशिष आयो । परमेश्वरको काम उनको जीवनमा देख्न र अनुभव गर्न सके । नयाँ करारमा पनि बाप्स्मिा दिने यूहन्नाको विषयमा यसरी भनिएको थियो । “किनभने तिनी परमप्रभुको सामने महान हुनेछन् । तिनले दाखमद्य र अरु कुनै पनि मद्य पिउने छैनन, र आफ्नो आमाको गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरिनेछन् ।” लका १:१५ । बाप्स्मिा दिने यूहन्नाले पनि दाखमद्य र अरु कुनै पनि मद्यले आफुलाई अशुद्ध नपार्ने बरु पवित्र आत्माले भरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । परमेश्वरको कामको निम्ति अलग गरिएका यी परमेश्वरका जनहरुले निश्चय पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिमा आफुलाई भरिपुरी बनाए । यी उदाहरणहरु तपाईं र मेरो लागि हुन् । तपाईं र मेरो पनि आज यही चुनौती छ कि परमेश्वरका जनहरु हरेकले आफुलाई हर तरहले शुद्ध र पवित्र राख्दै पवित्र आत्मामा भरिनु जरुरी छ । मानिस जे कुराले भरिन्छ त्यसलैबाट उ नियन्त्रित हुन्छ । यदि उ रिसले भरिएको छ भने उ रिसद्धारा नियन्त्रि हुन्छ । यदि उ जाँड, रक्सीले भरिएको छ भने उ त्यसैद्धारा नियन्त्रित हुन्छ । यदि उ प्रेम र पवित्र आत्माद्धारा भरिएको छ भने त्यसैबाट नियन्त्रित हुन्छ । के तपाईं आफुलाई रित्तो पाउनु भएको छ? पवित्र आत्माले भरिनुहोस् । दैनिक उहाँमा रहनुहोस् । जसमा परमेश्वरको आशिष रहनेछ ।
– रेशम कुमार सुनुवार
« कविता शीर्षकःजीवन एउटा यात्रा
खोइ त बाँडेको…? »